✡တက်ကြွ - နိုဝင်ဘာလ 19 2016- ဂြိုလ်သားနည်းပညာ? Pineal စက်ပစ္စည်း? // EP057 ✡ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ✡တက်ကြွ - နိုဝင်ဘာလ 19 2016- ဂြိုလ်သားနည်းပညာ? Pineal စက်ပစ္စည်း? // EP057 ✡
Megan မတ်လ 23, 2017 ဗီဒီယိုများTagged အဘိဥာဏ်လအော adimmix, Agartha, ဂြိုလ်သားမွေးမြူရေးအစီအစဉ်များ, တက်ကြွ, Atlantis, ကျောက်သလင်းကလေးများအဘိဥာဏ်စာအုပ်များ, အခမဲ့အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ချက်တင်, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, ဆွန်းမြေကြီးတပြင်, ဟိုက်ဘရစ်အစီအစဉ်ကို, အတွင်းစိတ်ကိုမွကွေီးသတ္တဝါ, အဘိဥာဏ်အသကျရှငျ, အဘိဥာဏ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်, တိုက်ရိုက်လွှအကြားအမြင်, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်, အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုချစ်, အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်, ဖုန်းကိုအဘိဥာဏ်, Pineal activation, အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်လအော, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်ဖတ်, အကြားအမြင်, sirius, ဝိညာဉ်ရေးရာအဘိဥာဏ်ဖတ်, ကြယ်ပွင့်မိသားစုများ, Starseeds, သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စမ်းသပ်ရန်, အဘိဥာဏ်ဟာကြည်လင်ကလေးများ10 မှတ်ချက် တက်ကြွ✡ - on နိုဝင်ဘာလ 19 2016- ဂြိုလ်သားနည်းပညာ? Pineal စက်ပစ္စည်း? // EP057 ✡
ငါတပါးနည်းပညာတွေအကြောင်းပြည့်စက်ဝိုင်းလာမယ့်အကြောင်းပြောဆိုဒီဗီဒီယိုကို, အ Agarthans (ခေါ်အတွင်းစိတ်ကိုမွကွေီးသတ္တဝါ) ခုနှစ်တွင်နှင့်မည်သို့သူတို့အပြုသဘောသူတို့၏တက်ကြွအလင်း activation ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူငါ့အသက်ကိုထိခိုက်ပွီ! 🙂
(အက်ဆန်းရှင်းဘို့ဂရိတ်တှေးတောဆငျခွ) ကဒီမှာပန်းခရမ်းရောင် PIXIE Watch: https://www.youtube.com/watch?v=6x6RPjpPU84
ဤဗီဒီယိုအားတက်ကြွရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုပုံစံကြုံနေရသူလူတိုငျးအတှကျဖွစျသညျ! ဒီဗီဒီယိုထဲမှာငါ Agarthans, Agartha, အတွင်းမြေကြီးတပြင်သတ္တဝါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြယ်ပွင့်မိသားစုများ, ဂြိုလ်သားနည်းပညာ, pineal ဝမျးသာ activation နှင့်အရှိန်အဘို့အဂြိုလ်သားနည်းပညာ, ပု reptilians, ရုပ်ရှင်၏လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသပုံဆိုးဝါးပြင်းထန်လွန်းခြင်း, စပ်အစီအစဉ်အတွက် hybrids တွေကိုဆွေးနွေး hybrids တွေကို, Mantis သို့မဟုတ် Mantid သတ္တဝါ, တပါးမွေးမြူရေးအစီအစဉ်နှင့်အများကြီးအများကြီး morrrre !! 🙂
သင်ဟာတစ်ဦးက Sirian Starseed ဖြစ်ပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏ Sirius Galactic မိသားစုအကြောင်းအားလုံး - Bridget Nielsen
Safon မှစ. Sirian Starseeds စေရန်တစ်ဦးကို Message
Sirius မိုင်းနား: Sirius ဂြိုလ်တွင်အဆိုပါယဉ်ကျေးမှု
အလင်း၏ Galactic အသင်းချုပ်ထံမှအလင်းကုသမှု၏ Sirian Starseed ဘာသာစကားများ
Enki အပိုင်း 1 ၏ပျောက်ဆုံးသွားသောစာအုပ် (နိဒါန်း)
STARSEEDS နှင့်သင့် DNA ကိုအဆင့်မြှင့်
SIRIUS: ဒေါက်တာစတီဗင် Greer ထံမှ - မူရင်းပြည့်တာရှည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (အခမဲ့!)
| အနားယူ & အိပ်စက်ခြင်း အပန်းဖြေစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာလုပ်နည်း, Beginners ယောဂဖြည့်, ကြက်
ပွင့်လင်းတတိယမျက်လုံး Chakra: အိပ်စက်ခြင်း Chakra တှေးတောဆငျခွထပ်ဆင့်တင်ခြင်း & ကုသမှု
ကျနော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာသစ္စာဉာဏ်အလင်းရနျကြှနျုပျတို့၏လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှများမှာ! ဒါဟာသင်ယူရာလမ်းကြောင်းကိုအရေးမပါဘူး - သငျရှိရလိမ့်မည်!
သန့်ရှင်းသောသင်္ကေတ - ထိုဘုရားသခငျ့၏မျက်နှာ!
Ankh6ဝိညာဉ်သို့မဟုတ် Electromagnetic World
သန့်ရှင်းသောဂျီသြမေတြီ, Numerology နှင့်မှော်သင်္ကေတ
အဆင့်မြင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါမှအထွတ်အမြတ်ဂျီသြမေတြီ Tool ကို
ဤချန်နယ်တွင်တွင်ငါကြယ်ပွင့်လူများ, lightworkers, Qi Gong, ယောဂ, ဘုရင်မ Nefertiti, လင်းပိုင်, လင်းပိုင်နှင့်တက်ကြွ, ဝေလငါးများနှင့်တက်ကြွ၏အကြောင်းအရာများ, ဝိညာဉ်ရေးရာလင်းပိုင်, starseeds, အလင်း, အတိတ်ဘဝဆုတ်ယုတ်၏ Galactic အဖွဲ့ချုပ်, clairvoyant, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အဖုံးကို , walkins, Galactic channel, ကြည်လင်ကလေးမဲနယ်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှန်တကယ်ဂြိုလ်သားရှိပါသလဲ ဟိုက်ဘရစ်ကလေးက (ကလေးများ), မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဂြိုလ်သား, ဂြိုလ်သားတွေ့နေရသည်, reptilians, ဂြိုလ်သားပြန်ပေးဆွဲပုံပြင်များ, ET ထုတ်ဖော်, Regression, ကောင်းကင်တမန်များ, polarity က, နတ်ဘုရားမ Bast, Thoth, အဘိဥာဏ်အစွမ်းအနှင့်မည်သို့ဂြိုလ်သားအဆက်အသွယ် / တွေ့ဆုံပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆက်စပ်, 3D သို့ 5D, ဝိညာဉျသအစားအစာများ, စူမီးရီယန်, annunaki, enki, niribu, ဆွန်းမြေကြီးတပြင်သီအိုရီ, ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ, မိခင်မြေကြီးနှင့်တကွတက်ကြွ, ကိုယ်ပိုင်နျဖိုးထား, ဆွဲငင်မှု၏ဥပဒေနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရာ, Nassim Haremin, Sirius, Sirian Starseed, DNA ကို Activation
မြေပြင်လေယာဉ်အမှုထမ်းဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကို - အလင်း၏ Sirian ကောင်စီ
ငါကဒီမဆိုအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းမရငါကဒီ video- များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြပုံတွေကိုမဆိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူး - - ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်အသုံးပြုရုံရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရုံသင်တို့ရှိသမျှကိုသိနိုင်အောင်။
မတ်လ 23, 2017 မှာ 10: 14 နံနက်
တစ်ဦးကလင်မယား months ago ဈသင်တစ်ဦးအယူအဆကိုငါ့ဦးခေါင်းထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အိမ်ပြန်လာမှငါ့ကိုမပြောပြနဲ့ကိုယ့်ထွက်သွားဘယ်မှာငါ့ကိုတောင်းဆိုနေတာမွကွေီးပျေါမှာကဒီမှာငါ့အမိ, ငါ့မိသားစုပဲကိုယ့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ပြောဆိုသောနှင့်သူမကပြောသည်တူသောရှိရာတစ်ဦးအတှေ့အကွုံခဲ့ ကိုယ့်အခြားမြေကြီးသို့ဆက်သွယ်ခဲ့သည်နှင့်အကြောင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာကိုယ့်အသေခံခဲ့သောသူတို့သည်လည်းငါ၏ဝိညာဉျသညျသှားခဲ့ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ငါ့ထံသို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မည်သို့ NEW ပြောဆိုထားသည်။ ဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းပြချက်ဈကပိုပြီးသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ငါ့ကိုလှည့်ပတ်အနက်ရောင်ကြီးနှင့်ကိုယ့်ငါ့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဟာကောင်းကင်တမန်သည်မိုက်ကယ်မေးသော်ကညျသှားငါ့မျက်စိနဲ့အရာရာကိုအတွက်အနီရောင်လေဆာရောင်ခြည်မှနိုးအိပ်ပျော်နေသောနေချိန်မှာကျွန်မအခြားတှေ့ဆုံခဲ့သညျ။ နောက်တစ်နေ့ရက်သတ္တပတ်ဈစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတက်ခူးနှင့်ငါ၏မျက်စိနံပါတ်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုချက်ချင်းအခြား "လောက" သို့သွားလေ၏ကြောင့်သူတို့သညျငါ့ကိုနှိုးရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အိပ်ပျော်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ကြောင်းငါ့ကိုပြောပြငါ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်အခြားတစျခုဖွစျသညျ ရာစုနှစ်များစွာနှင့်ကျွန်မအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုခံရဖို့နောက်ဆုံးအမြား၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ငါတကယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမဆိုအိုင်ဒီယာကိုသိ dont အစဉ်အဆက်အဘယ်သူသည်ငါနှင့်အတူအအဆက်အသွယ်၌တည်ရှိ၏နှင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါသနည်း
ဟယ်လို။ 1 စတေးလျမှအခြားရန်။ ငါအဖြစ်မှန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့အကြောင်းအကြီးနားလည်မှုရှိသည်။ ငါသည်ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြတ်သားပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါရိုးရှင်းစွာ (ဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်ယူရန်ပေမယ့်ပွင့်လင်း) နဲ့သဘောမတူဘူးအရာတစ်ခုမှာဒီတက်ကြွသည်နှင့် ET ရဲ့ archons စသည်တို့စသည်တို့ကိုငါမှားလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုအများအပြားရှိပါတယ်စိတ်ပူတယ်အဖြစ်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ chat လို့ရပါတယ်။ ကြေးဇူးတငျစကား
ရောဘတ် Buonopane says:
wow ကြောင့်ပဲနှိပ်လိုက်ငါသည်ဤကြောက်မက်ဘွယ်ခံစားမှုတယ်ငါတတ်နိုင်သမျှ သိ. ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများတဦးတည်းကိုကြည့်ပြီးနောက်ဒါဝိဒ်သည် Wilcock နှင့်အတူပေါင်းစပ်သူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်ငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Origins နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုတွေအကြောင်းအမှန်တရားကအူခံစားမှုပိုင်နားလည်သဘောပေါက်ဖန်ဆင်းအခြေခံအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာဇာတ်လမ်း၏ကြင်နာမယ့် '' t ကိုသင်တို့အားငါနဲ့တူ telepathic ပြောဆိုမှုများပြုပါရပါဘူးသူကရှင်းပြသင်တို့ကိုငါနောက်ကျောပေါ်မှာဆိုရင်ဒါသည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်နောက်တဖန်သင့်ရဲ့အသံကိုကြားဖို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်
Donna Wohlbach says:
နောက်တဖန်သင့်အသံကိုကြားလျှင် Love? ငါမူကားဤအချိန်တွင်သတိထားဖြစ်ကြောင်းကိုတပါးမှမပါကွန်နက်ရှင်!
Jean-Guy E ကိုရှန်ပိန် says:
မင်္ဂလာပါဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုများအတွက်ဗီးနပ်စ် THX ဦး ... ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသင်နှင့် ???? forms..❤အားလုံးဘဝနှင့်အတူရှိ ... သူတစ်ဦးဦးကိုငါ့နဂါးပေါ် commented ငါ့ကို Woodburning ဖွငျ့ဤအနုပညာကို ... သူတို့ကျနော် Sirius system သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုကနေငှါဆိုပါတယ် တစ်နည်းနည်းနဲ့က ... သင် pls pls ... အကြောင်းအရာအချို့ကိုပိုပြီးပြောပြနိုင်မလား?
သငျသညျအစဉျအမွဲအခွင့်အလမ်းရခဲ့လျှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမတိုင်မီပြောင်းကုန်ပြီ / ဖြစ်ရပ်မှပိုမိုမြင့်မားဝိညာဏ်ခံယူမည်ဟုအဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏ ETS တဦးကိုမေးမယ်ဆိုရင်ငါအရှိဆုံးကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ တဦးတည်းကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအခြား🙂ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပါ!
သင်တို့သည်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများကြီးသင်ယူငါဆိုလိုကြီးမြတ်အချိန်လို့ပြောတဲ့အခါငါတခါထပ် palladians နှင့် ဆက်စပ်. ခံစားခဲ့ရကြိုဆိုအိမ်မှာချွတ်တဲ့အကြီးအအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်တူသောကြောင့်ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်အကြီးအဖွင့်အသံ
ငါသည်သင်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းခေါင်းစဉ်အချို့နှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂလိကသင်နှင့်အတူစကားပြောချင်ပါတယ်။